कम्प्युटर नै धेरै सुविधा-सम्पन्न ह्यान्डसेटमा छ। यसलाई विभिन्न विकल्प र सेटिङहरू धेरै बनाए। तिनीहरूलाई को एक प्रणाली समय छ। सामान्य मा, समय, कम्प्युटर मा धेरै जोडिएको छ। कम्प्युटर सामान्य घण्टा रूपमा गलत जान्छ मा गणना, तर यसलाई यहाँ छैन। गरेको windose संग कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम कुरा गरौं। घण्टा सही देखि तल्लो दायाँ कुनामा आफ्नो स्क्रिनमा छन्। तिनीहरूले विभिन्न तरिकामा प्रदर्शित गर्न सकिँदैन। साथै, सबै पत्रिका सक्षम वा कम्प्युटर बन्द आवश्यक समय लिङ्क। त्यसैले, कहिलेकाहीं यी धेरै घण्टा आवारा सक्छ। किन कम्प्युटर बन्द समय हुन्छ?
तपाईंको कम्प्युटरमा समय किन सही प्रदर्शित थिएन धेरै विकल्प छन्।
समिकरण। तपाईं अनलाइन जाने, तपाईंको सिस्टम windose, आफ्नो काम खोज, अद्यावधिक गर्न, वा अन्य कार्यहरु सुरु गर्न निश्चित हुन। तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्छ र नोटिस छैन। त्यसैले, सबै को पहिलो, सञ्चालन प्रणाली समय सर्भर चढती। कि यो सबैभन्दा सही छ जो इन्टरनेट, समय आफ्नो कम्प्युटर समय गर्ला छ। तपाईं अर्को देश, छैन एक जहाँ सर्भर स्थित छ बस्नुहुन्छ, वा कम्प्युटर अर्को सर्भर तुलना गरिएको छ भनेर सिस्टम कन्फिगर गरिएको छ भने, समय आफ्नो हरेक इन्टरनेट पहुँच मा केही घण्टा बन्द चलान गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई बन्द बरु मिनेट भन्दा, घडी मा ठीक हुन्छ। यो सबै कि समय क्षेत्र जाँच गरिन्छ तथ्यलाई कारण छ। यो किन आफ्नो कम्प्युटर बन्द समय हुन्छ कारण छ।
खराब ब्याट्री - किन प्रश्नको जवाफ आफ्नो कम्प्युटर बन्द समय हुन्छ। कुनै आश्चर्य किन आफ्नो कम्प्युटर बन्द हुँदा र त्यसपछि चालू, समय नै हो? यो कुरा आफ्नो कम्प्युटर को Motherboard, त्यहाँ एक विशेष BIOS चिप छ भन्ने छ। यो ब्याट्री एकीकृत छ। त्यो जानकारी कम्प्युटर बन्द गर्यो, धेरै वर्ष सम्म राख्न सक्षम छ। मा स्विच पछि, बुट गर्न पहिलो कुरा BIOS मा निहित छ भन्ने जानकारी छ। किन कम्प्युटर बन्द समय हुन्छ? यो खराब BIOS ब्याट्री हुन सक्छ। त्यो समय भण्डारण गर्न सक्षम छैन र बन्द हुन्छ।
कम्प्युटर मा ब्याट्री आकार मा सानो छ र कम्प्युटर चलिरहेको बेला निरन्तर चार्ज छन्। जब तर पटक हो कम्प्युटर चालू छैन एक लामो समय को लागि, र ब्याट्री यसको शुल्क हराउछ। समय र अन्य मानकहरु आवारा गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीं, यो धेरै छिटो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा, तपाईं ब्याट्री परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं एक कम्प्युटर सेवा केन्द्र समावेश गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईंले यसलाई आफैलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। लामो यो एक सानो लाग्न गर्दैन।
कम्प्युटर मा ब्याट्री प्रतिस्थापन धेरै कठिनाई बिना आउँछ। यो गर्न, तलका चरणहरू:
तपाईंको खोल्न , कम्प्युटर मामला कवर हटाउने। आराम ठाँउ।
को Motherboard ब्याट्री शक्ति पाउन। यो गर्न, कम्प्युटर mains विच्छेद हुनुपर्छ। ब्याट्रि एउटा सानो राउन्ड, को BIOS नजिकै स्थित छ। जब हामी बोर्ड देखो, तिमी उसलाई एकैचोटि पाउनुहुनेछ। तसर्थ, जो सधैं कम्प्युटर आउँछ कागजात, हेर्न।
कम्प्युटर स्टोर मा एक ब्याट्री किन्न। तपाईं पनि मदत र ब्याट्री कसरी परिवर्तन गर्न व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ।
पुरानो हटाउन र नयाँ ब्याट्री घुसाउनुहोस्।
कम्प्युटर आवरण बन्द र mains यसलाई जडान गर्नुहोस्।
कम्प्युटर मा बारी, र सही समय कन्फिगर गर्नुहोस्।
कम्प्युटर बन्द र यो समय अब हराउनु जाने भनेर पक्का गर्न, फेरि सक्रिय।
यी सरल कदमहरू तपाईँ प्रणाली ब्याट्री प्रतिस्थापन गर्न मद्दत गर्नेछ, र राम्ररी काम गर्न आफ्नो कम्प्युटर सेट अप। साथै, यस ब्याट्री को प्रतिस्थापन सिफारिस गरिएको छ समय। सबै साथै सम्पत्ति, र कम्प्युटर लगाउने छ। निश्चित प्रसन्न तुल्याउने मात्र कुरा हो, यसलाई कुनै पनि कम्प्युटर स्टोर मा ब्याट्री किन्न मौका छ, आज यो भाग्यवस एक ठूलो समस्या छ।
मिनी HDMI: वर्णन, पद इन्टरफेस
राम-स्मृति र कसरी यो काम गर्दछ
फोटो कालो Canon pixma ip2200 INKSYSTEM: गुणवत्ता र अर्थव्यवस्था को एकता
एक ब्लुटुथ माउस कसरी छनौट गर्न
केन्द्रीय स्नायु प्रणाली पंप के हो?
स्किड हुनको लोडर Bobcat अमेरिकी उत्पादन
तपाईंको आफ्नै हातले भित्री सजावट लागि अनुकरण ईटा
त्यस्ता मानिसहरूलाई प्रबन्ध: तिनीहरूले "म विवाह गर्दा" के हुनेछ, वा प्रेतविद्यासम्बन्धी जान्न चाहन्छु
रूसी सामान्य Kuropatkin Aleksey Nikolaevich: जीवनी, पुरस्कार
कजान मा Dolphinarium रोल
अङ्ग्रेजीका संज्ञाहरूको अंग्रेजीमा: नियमहरू, उदाहरणहरू
मह संग ओवन मा चिकन - को ruddy र सुगन्धित
तपाईं एक घुमक्कड मा गद्दा किन चाहिन्छ?